Shirkii Soomaaliya iyo Somaliland oo qodobo heshiis hordhac ah laga soo saaray | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Shirkii Soomaaliya iyo Somaliland oo qodobo heshiis hordhac ah laga soo saaray
Shirkii Soomaaliya iyo Somaliland oo qodobo heshiis hordhac ah laga soo saaray
Wararka laga helayo Jabuuti ayaa sheegaya in Guddigii Farsamo ee kala matalayay Soomaaliya iyo Somaliland ee saddexdii maalmood ee la soo dhaafay wada hadalka u socday ayaa ugu dambeyn heshiis kala saxiixday.
Guddigii Somaliland matalayay ayaa isaga baxay shirka iyadoo markii dambe dib loogu soo celiyay wada hadalka.
Dowladda Jabuuti oo shirkan martigelineysay ayaa Wasiirkeeda Arrimaha Dibadda Maxamuud Cali Yusuf uu ku guuleystay in mar kale uu isu keeno labada dhinac, kaddib markii dhinaca Somaliland Guddigii matalayay ay isaga baxeen shirka.
Qodob ka mid ah war murtiyeedka oo la isku mari la’aa ayaa ugu dambeyn suura gashay in la xaliyo, taasoo keentay in shirka dib ugu soo laabtaan dhinacii matalayay Somaliland.
Guddiga Somaliland ayaa diiday inay wax tanaasul ah ka sameeyaan qodobkii Guddiga Soomaaliya ka socday ku soo dareen ee ahaa Xoriyadda isu socodka dadka labada dhinac, waxaana markii dambe qodobkaas loo saaray guddi gaar ah.
Guddiyo laba dhinac ah oo loo saaray shirka iyo sii socoshadiisa ayaa gaba-gabdii soo saaray dhowr qodob oo hordhac ah isla markaana ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen.
Heshiiska hordhaca ah waxaa wadajir ah u saxiixay Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo Wasiirka arrimaha Dibadda Soomaaliland.
Heshiiska hordhac ah waxaa si wadajir ah u saxiixay Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo Wasiirka arrimaha Dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Faratoon,waxaana qodobada ay kala yihiin sidaan.
2: Sidii dib loogu dhisi lahaa Kalsoonida labada dhinac ay isku qabi karaan.
3: Sidii loo meel marin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore ee aan la hirgelin sida Kaalmooyinka Dhaqaale ee Caalamiga ah iyo Gargaarada Bani-aadamnimo, waxaana qodobkaasi loo saaray guddi, kuwaasi oo shiridoona muddo shan iyo toban cisho (15) ka dib ah, kuna shiridoona waddanka Jabuuti.
4: Waxaa ay labada dhincba soo saareen guddi ka wada xaajoon doona Arrimaha Hawada, kuwaasi oo muddo shan iyo toban cisho ah ku shiridoona waddanka Jabuuti.
5: Waxaa ay labada dhinacba soo saareen guddi saddexaad oo ka wada shaqayn doona Arrimaha nabad-gelyada.
Shirkaan ayaa la aaminsanyahay in uu ka duwanaa shirarkii hore in kasta oo ay jireen caqabdo hareeyay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dhaqabgelinta qodobada heshiisyadii horay loo gaaray maamulka Hawada qeybsida Kaalmada caalamka iyo qodobo kale iyada oo ay jirto iskusoo dhawaasho laga sameeyay waloow guddiyada loo saaray wadahadalada ay sii wedi doonaan.